Mogadishu Journal » 2018 » February » 11
Mjournal :-Wararka naga soo gaarayo deegaan lagu magacaabo War-mooley oo u dhaxeeya Degmada Ceelbuur iyo Magaalada Dhuusamareeb ayaa soo sheegaya in halkaasi uu ka dhacay dagaal u dhaxeeya Al-Shabaab iyo dadka deegaanka. Wararka ayaa sheegaya in dagaalka uu salka ku haayo labo...
US state politician Ilhan Omar says she holds Trump ‘exclusively responsible’ for the rise in Islamophobia in the US. Hers is a remarkable journey: from a refugee camp in Kenya to a state legislature in the United States. In 2016, Ilhan Omar became the first elected...
Real Madrid ayaa dib ugu soo laabatay wadadii guulaha kadib markii ay Bernabeu ku xasuuqeen Real Sociedad kulan ka tirsan horyaalka La Liga, waxeyna ku awood sheegteen 5-2. Cristiano Ronaldo ayaa dhaliya sadexley wuxuuna dib ugu soo laabtay hanaankiisii goolasha isagoo haatan...
Mjournal :-Manchester United ayaa isha ku heysa inay guul ka gaarto kulanka ay u safrayaan Newcastle United galabta oo axad ah. Red Devils waxay shan dhibcood ka sareysa kooxda kaalinta seddexaad ee Liverpool, waxaana ay dooneysaa inay ka badiso Newcastle oo aan guuleysan afartii...
Mjournal :–Xaalada Degmada Afgooye ee Gobolka Sh/Hoose ayaa dagen kadib markii ay xalay fiidkii Al-Shabaab ay ku soo qaadeen weerar Ciidanka Dowlada oo fariisin halkaasi ku lahaa. Saraakiisha Ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in dagaalyahano ka...
Diyaarad laga soo riday Turkiga
Mjournal :-Kooxda Kurdiyiinta ayaa xaqiijiyay in ay soo rideen Diyaarad kuwa qumaatiga u kaca oo ay leedahay dowladda Turkiga gobolka Afrin ee dalka Suuriya. Ciidamada dowladda Turkiga ayaa maalmihii lasoo dhaafay howlgallo aan joogsi laheyn waxa ay ka wadeen dalka Suuriya. Inta...
Qodobo lagu heshiiyay shirkii Amniga Qaranka oo xalay la soo gabagabeeyay
Mjournal :-Golaha Amniga Qaranka ayaa kulankoodii Lixaad ku yeeshay magaalada Muqdisho, 6-10 Feebaraayo 2018. Shirkaas oo ka dhacay xarunta Maaxtooyada – Villa Somalia ee magaalada Muqdisho. Kulankan oo looga hadlayey arrimaha Amniga Qaranka waxaa shir-guddoomiyey Madaxweynaha...